Omume kachasị mma maka ọdịda: Otu esi achọ maka ntụgharị | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Thursday, July 9, 2015 Jenn Lisak Golding
Dịka ahịa ahịa na-aga n'ihu na-agbanwe, ọ na-esikwa ike ịme nke ọma. Ahịa dị ugbu a ọtụtụ ọwa na ọtụtụ akụkụ. Ọ dịghị mfe dịka ikenye mgbasa ozi na mgbasa ozi mmadụ ugboro ole na ole n'izu ma ọ bụ izipu email otu ugboro n'ọnwa. Ikwesiri ighota otutu uzo di iche iche nke mejuputara ibe ha, ma nwe ike igbanwe ma megharia ma oburu na uzo adighi aru. Ọ na-agwụ ike ịbụ onye na-ere ahịa, ọ bụghị ya?
Ma ị maara ihe agbanwebeghị n'ezie? Wayzọ anyị si ejide anyị na-eduga. Ibe ọdịda ahụ abụrụla akụkụ nke usoro atụmatụ ịzụ ahịa, yana, n'ozuzu, e mepụtara ọtụtụ peeji ọdịda dị iche iche iji dọta ahịa dị iche iche ma kwalite ihe dị iche iche. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịgbanwe ma gbanwee kemgbe ọtụtụ afọ, peeji nke ọdịda ga-anọ n'ọnọdụ ụfọdụ ma ọ bụ ụdị.
Yabụ, ọ bụrụ na ha bụ isi nke ijide ndu, kedụ otu ị ga - esi bulie ihu akwụkwọ ọdịda gị iji mepụta ndu ndị ọzọ? Na-ekwu okwu “Mmebe nke Peeji Ichebe"Site naMpempe akwụkwọ , na isi ederede ole na ole maka ihu ala zuru oke:
N'ogige atụrụ Okwu - Ọ bụ ezie na a gwara ndị na-ere ahịa na "ogige" enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ma a bịa na peeji nke ọdịda, ọ dị mkpa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ụdị dị n'elu ogige ahụ, ị ​​kwesịrị ịnwe oku iji rụọ ọrụ pụtara n'elu ogige ahụ.
Ndị na-egosi ntụkwasị obi - Mgbe ị na-eji peeji ọdịda iji mee ka mmadụ mee ihe, "ndị na-egosi ntụkwasị obi," dị ka akaebe, akara ngosi, asambodo, na isi okwu mgbasa ozi dị oke mma ịgụnye na peeji nke ọdịda iji wulite ntụkwasị obi na ikike.
Vidio, vidiyo, vidiyo - Doug na m na-ekwukarị banyere otu vidiyo na-aga n’ihu ịdị mkpa; anyị na-ebu amụma na vidiyo ga-adị na ibe ọ bụla nke weebụsaịtị n'ọdịnihu. Vidiyo na peeji nke ọdịda nwere ike iwelie ntụgharị site na 86%!
Ịkekọrịta Ahịa - Ọdịda peeji bụ nnukwu nchịkọta ozi niile ịchọrọ na ngwaahịa, ọrụ, mmemme ma ọ bụ nkwalite enyere. Nke ahụ kwuru, ọ bụkwa ebe zuru oke iji tinye mmekọrịta mmadụ na ibe gị ma hụ na ị nwere snippets bara ụba ka ha wee dị oke mma mgbe ha na-akọrọ ha!
Chepụta Karịa Otu - Etinyekwa oge na mbọ gị niile n'otu peeji ọdịda. Iji Sistemụ Njikwa Ọdịnaya, ị nwere ike ịmepụta ihe karịrị otu peeji ọdịda na-enweghị isi ma gbanwee imewe na verbiage na nke ọ bụla iji hụ nke kachasị enweta traction.
Nwale, Ule, Ule - Ahu nagide Nnwale A / B ịgbanye vidiyo, isi okwu na ịkpọ oku iji pịpụta ọtụtụ ntụgharị!
Disclaimer: DK New Media bụ mgbakwunye nkeMpempe akwụkwọ .
Tags: Ndị na-akwadon'ogige atụrụmpempe akwụkwọmeputa ndu ndi ozoinbound marketinginfographicọdịda pageọdịda peeji nke omume kacha mmaọdịda peeji nke njikarịchambido peeji nkeedu ọgbọVidio Ahịavideo ọdịda peejiọdọ mmiri
Sep 21, 2015 na 7: 56 AM
Ezi post, daalụ. N'ezie ekwesiri ịtụle na ule